Ungayihlengahlengisa njani ikhibhodi yakho yeMac
Akukho mntu usebenzisa ikhibhodi kunye nempuku ngendlela efanayo. Inkqubo yeNkqubo yokuKhethwa kweKhibhodi kwi-Mac OS X Intaba yeNgonyama inikezela ngee-tabs ezininzi ukuze ukwazi ukuguqula indlela yokuziphatha kwebhodibhodi yakho ngeendlela ezininzi. Ke into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuvula ikhethini yokukhetha ikhibhodi ngokukhetha iApple → Ukukhetha kweNkqubo kwaye ucofe i icon yekhibhodi.
Ikhefu yeNkqubo yokuKhetha yeeKhibhodi inezithebhu ezimbini: Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo.
Kwithebhu yekhibhodi, unokuhlengahlengisa useto lwakho kwezi ndlela zilandelayo:
Tsala i Isitshixo sokuphindaphinda isilinganiselo sesilayidi ukuseta ukuba isitshixo siphinda ngokukhawuleza kangakanani xa usibambe. Eli nqaku liza kudlala xa (umzekelo) ubambe iqhagamshela (-) iqhosha lokwenza umgca okanye i-asterisk (*) isitshixo sokwahlulahlula.
Tsala ulibaziseko kude kuphindwe isilayidi ukuseta ukuba kufuneka ubambe iqhosha elingakanani ngaphambi kokuba liphindaphinde.
Ungachwetheza kwibhokisi ethi Chwetheza apha ukuvavanya iisetingi ukuvavanya useto lwakho ngaphambi kokuphuma kule tab.
Ukuba unayo incwadi yamanqaku iMac (enjengeMacBook, iMacBook Pro, okanye iMacBook Air), ubona enye okanye ezingaphezulu kwezi zinto zongezelelweyo:
Sebenzisa zonke i-F1, i-F2 Keys njengeeNdawo eziSebenzayo zoMsebenzi: Ukuba le bhokisi yokukhangela ikhethiwe, amaqhosha e-F aphezulu kwikhibhodi yakho lawula usetyenziso lwesoftware esebenzayo.
Sebenzisa izixhobo ezizodwa zehardware eziprintwe kwisitshixo ngasinye F (bonisa ukukhanya, ukubukelwa kwesikrini, ivolumu yesandi, isimumu, njalo njalo), kuya kufuneka ucofe iqhosha le-Fn (Umsebenzi) ngaphambi kokucinezela iqhosha le-F. Ukuba ibhokisi yokukhangela ishiywe ingakhethi, kufuneka ucofe iqhosha le-Fn ukuba ufuna ukusebenzisa amaqhosha e-F ngesicelo sesoftware. Ndiyifumene? Kulungile.
Okokugqibela, ezi zitshixo zinokungasebenzi ukuba usebenzisa ikhibhodi yomntu wesithathu (enye ayenziwanga yiApple).
Lungisa ukuqaqamba kwekhibhodi kukuKhanya okuPhantsi: Le bhokisi yokukhangela ijika kwaye icime ilaptop yakho.
Cima xa ikhompyuter ingasetyenziswanga: Olu lawulo lwesilayidi lukuvumela ukuba ubone ukuba isibane sebhodi yezitshixo sihlala ixesha elingakanani xa ikhompyutha yakho ingasetyenziswa.
Ewe ikhompyuter yakho ayenzi njalo unayo Ukukhanya kwebhodi yezitshixo, njengoko uninzi lungaboni, awuziboni izinto ezimbini zokugqibela.
Bonisa ikhibhodi kunye nababukeli babalinganiswa kwimenyu yebar: Le bhokisi yokukhangela yongeza imenyu entsha yokuvula nayiphi na kwezi windows ziluncedo.
Cofa i-Emoji kuluhlu olusekhohlo lwewindows Viewer ukuze ufake ubuso obuncumo kunye namakhulu eminye imifanekiso emihle kumaxwebhu akho.
Igalelo leMithombo yeqhosha: Iitshintshela kwitheyibhile yeeNgeniso zeNgeniso yoLwimi kunye neNkqubo yokubhaliweyo, apho ungabonisa khona ikhibhodi enye okanye nangaphezulu yolwimi lwangaphandle kwimenyu yokufaka.
Imenyu yokufaka kunye nekhibhodi kunye neMenyu yokujonga abalinganiswa ziyinto enye. Ukuba ukhetha ibhodi yezitshixo enye okanye ezingaphezulu zangaphandle, iyatshintsha ukusuka kwi icon engacacanga eboniswe kwiflegi yekhibhodi ekhethiweyo (yiflegi yaseLithuania, ngendlela).
Iqhosha lokuguqula: Kukuvumela ukuba utshintshe isenzo esenziwe ngooCaps Lock, uLawulo, uKhetho, kunye namaqhosha olawulo. Iluncedo ngakumbi ukuba usebenzisa ikhibhodi engeyo-Apple, nangona isebenza kakuhle kwiikhibhodi ze-Apple nayo.
Iindlela ezimfutshane zekhibhodi
Awunokongeza kuphela, ucime, okanye utshintshe iindlela ezimfutshane zekhibhodi kwimisebenzi emininzi yenkqubo yokusebenza (njengokuthatha umfanekiso wescreen okanye ukusebenzisa ikhibhodi ukukhetha imenyu kunye nezinto zeDock), kodwa ungongeza, ucime, okanye utshintshe ikhibhodi iindlela ezimfutshane zezicelo zakho.
Ukuqala, khetha i Iifomaththi ezimfutshane kwibhodi yezitshixo kwiFestile yeeNdlela zokuKhethwa kweeNkqubo. Ngoku unokwenza nayiphi na okanye zonke ezi zinto zilandelayo:
ukhetho lwam lokuthintela ukukhawulezisa
Ukutshintsha indlela emfutshane, Cofa kuqala usetyenziso olufanelekileyo, ukhetho, okanye inqaku kwikholamu yasekhohlo. Emva koko, cofa kabini indlela emfutshane ofuna ukuyitshintsha kwicala lasekunene lekholamu (umzekelo, F3 okanye cmd + G). Indlela emfutshane endala iyaqaqanjiswa; xa isenza, cinezela amaqhosha amfutshane onqumlayo ofuna ukuwasebenzisa.
Ukongeza indlela emfutshane, cofa iqhosha +. Khetha isicelo esifanelekileyo kwimenyu yokungena kwesicelo, chwetheza igama ngqo lomyalelo wemenyu ofuna ukuwongeza kumhlaba wesihloko seMenyu, kwaye ucinezele indlela emfutshane ofuna ukuyinika loo myalelo kwiNdawo emfutshane yebhodi yezitshixo.
Ukuba indlela emfutshane oyicinezelayo isetyenziswa lolunye usetyenziso okanye ukhetho, uphawu lwesilumkiso esimthubi esingunxantathu luvela ecaleni kwalo. Ilula ngokulula.
Ukucima indlela emfutshane, ukhethe kwaye ucofe iqhosha -.
Imithetho ka-robert ye-ajenda yomyalelo
citalopram iziphumo ebezingalindelekanga zexesha elide
Simparica iziphumo ebezingalindelekanga
Ixabisa malini i-lexapro
I-allopurinol 100 mg yecwecwe